Mersin Okporo lazọ Relaxes na Sistemụ Njikọ Di omimi | RayHaber
HomeGeneralMersin okporo ụzọ na-ejiri usoro di omimi nyocha
28 / 07 / 2018 General, Ụzọ Awara Awara, Turkey
System Control System, nke Mersin Metropolitan Municipality mere ka ngosi ahụ na PTT Junction na mmalite nke 2018 wee nweta ihe ịga nke ọma, na-aga n'ihu na ọrụ ọrụ na Mersin. Mgbe a ga-anwale ikpe ikpe ikpe na-aga n'ihu, a ga-etinye Mersin okporo ụzọ n'etiti Mersin maka ụzọ dị ugbu a ma dị mfe ijikwa okporo ụzọ.
Gburugburu obodo nke Ngalaba Ụgbọ njem site na ìgwè nke usoro nhazi usoro mgbagwoju anya maka ntinye nke akụrụngwa maka ntinye nke ese foto na-aga n'ihu. A ga-arụ ọrụ mgbakọ ahụ na njedebe nke ọnwa ahụ, a ga-etinyekwa Dynamic Junction Control System na 67 nkwụsị.
H. Okan Merzeci Boulevard 156. Ndị otu malitere site na Cadde Junction, Kurdali Junction, Selen Junction, Yumuktepe Junction, ọrụ nke H. Okan Merzeci Boulevard 207. Okporo ụzọ n'okporo ámá, Akbelen Boulevard Salt Glass Trade, Exchange Banio Market na-aga n'ihu. N'otu oge ahụ, ìgwè ndị ahụ ga-emelite akụrụngwa akara na nkwụsị 46 dịka akụkụ nke ọrụ ahụ.
Mersin na-arịwanye elu na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-echekwa nsogbu okporo ụzọ na-enye ihe ngwọta maka obodo ukwu Metropolitan na-eme ka usoro ntọala gafere site na usoro ọgụgụ isi ga-ekwe ka njikwa nke mmekọrịta okporo ụzọ. N'ihi usoro a, a ga-egosipụta usoro mgbaàmà ngwa ngwa na ntanetị, obodo ga-enwe ike ịmepụta ma depụta ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ nke obodo ahụ. A ga-etinye usoro igwefoto maka ntụziaka ọ bụla ejikọtara na nkwụnye ọnụ iji gụọ ụgbọala ndị ahụ na ntuziaka kwekọrọ na ya, mgbe data a na-enweta site na igwefoto ndị a ga-anakọta na okporo ụzọ System Control Management System na a ga-achịkwa okporo ụzọ obodo ahụ.
Ịchekwa mmanụ ụgbọala, belata ihe ọkụkụ carbon
N'ihi igwefoto a jikọtara na nkwụsị, usoro a na-achọpụta ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala na ntụziaka ọ bụla ma jikwaa ọkụ ọkụ ọkụ na-adabere na njedebe ụgbọala. Ekele maka usoro ahụ, nke na-enye ìhè akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ogologo oge na ntụziaka kachasị ọsọ, a ga-ebelata oge nkwụsị nke ụgbọ ala ahụ.
Usoro a, nke ga-ekwe ka ugbo ala nọgide na okporo ụzọ maka oge dị mkpirikpi, iji belata nsị okporo ụzọ, iji belata oge nfu oge, iji belata mmanụ ụgbọala, ga-ebelata ibelata mmetọ gburugburu ebe obibi. N'ebe a, mmelite 29% na oge echere, 50% Mbelata n 'ikuku carbon na 30% nchekwa ego na-enweta na nkwụsị ọ bụla.
A ga-etinye usoro a nwalere na nkwụsị PTT na nkwụsị 67, ụzọ kachasị njọ nke okporo ụzọ, karịsịa na Mezitli Municipality Junction, Dumlupınar Junction, Çetinkaya Junction, Hilton Junction, na Mersin okporo ụzọ ka a ga-enyefe ya n'afọ.
System Dynamic Junction Control System na Mersin
Ọ bụrụ na ị na-achịkwa nke a Center
5 na Gaziantep na-ejikọ ndị agbata obi na Kö ibe ya
Ụlọ ọrụ na-enyefe onwe ya na Nilufer
Na OMU Kurupelit Campus, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike ın
Mersin okporo ụzọ
Antalya 3. Gıyaseddin Keyhüsrev Junction na Project System Rail System